Laacibka Kooxda Arsenal Aaron Ramsey oo dhameystiray heshiiska Kooxda Juventus – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeSportsLaacibka Kooxda Arsenal Aaron Ramsey oo dhameystiray heshiiska Kooxda Juventus
12/02/2019 B M Sports 0
Hiiraan Xog, Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Arsenal Aaron Ramsey ayaa saxiixay heshiis horudhac ah oo uu ugu biirayo dhamadka xili ciyaareedkaan six or ah kooxda Juventus, sida ay ku dhawaaqday kooxda Serie A ka dhisan.
28 jirkaan ayaa ogolaaday heshiis afar sanno ah inuu ugu biiro kooxda heysata horyaalka Talyaaniga isagoo xor ah, kadib markii uu soo idleeyo 11 sanno oo uu kusgnaa kooda Arsenal 1 july ee sanadkaaan.
amsey ayaa maray tijaabada caafimaadka qeybtii labaad ee suuqii Janaayo, iyadoo Juventsu ay kaga guuleusatay wadahadaladiisa kooxo badan oo ka dhisan Yurub.
Wuxuu noqon doonaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee kasoo jeeda British dhanka mushaarka marka la barbardghigo ciyaartooyda kale ee Uk isagoo qaadan doonaa isbuucii lacag lagu sheegay 4000k.
Qandaraaska xiddiga reer Wales ee Gunners ayaa dhacaya 30ka June, waxaana Arsenal ay ku qasban tahay inay sii deyso ciyaaryahanka isagoo xor ah 1 July markaasoo uu xiran doono maaliyada Juve.